Somalia :Midowga Yurub oo dhismaha waddada sodonka dhaqaalo ku bixiyay
Home Somali News Somali Government Somalia :Midowga Yurub oo dhismaha waddada sodonka dhaqaalo ku bixiyay
Ururka Midowga Yurub ayaa dhaqaalo ku taageeray dhismaha wadada sodonka oo meel gabo gabo ah maraya, sida uu sheegay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kadib kulan dhexmaray Xasan Cali Kheyre iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaana lacagtaasi lagu wareejiyay ra’iisul wasaaraha dalka.
Wuxuu u mahad celiyay midowga Yurub oo usoo diray warqad uu ku cadeynayo inuu ka taageerayo dowladda Soomaaliya dhinacyada kala duwan ee ciidamada iyo dib u dhiska dalka.
“Waxaan Safiirada iyo Midowga Yurub uga mahadceliyey warqada qoraalka oo ay ku caddeynayaan sida ay diyaarka ugu yihiin garab-istaaga dhan walba ah. Midowga Yurub waxey 2 Million oo Euro ay ku bixiyeen taageerada Booliiska”
“Halka 2 Million oo kale ay ugu talogaleen in 1000 dhalinyaro ah shaqo loogu abuuro, 300 oo kamid ahna jidka 30ka lagu kabo iyo in Dowlad Goboleedyada la gaarsiiyo qeyb ka mid ah dhaqaalahaas.”ayuu yiri ra’iisul wasaaraha dalka.
Prime Minister Ali Kheyre, visited injured Member of parliament, named Barow...
Maxay Qatar ka damacsan tahay Somalia 2040 ?
Hadalka ka careysiiyay Somaliland ee uu jeediyay Mr Keating